FACEBOOK DARTIIS AYAAN GAROOB U NOQDAY (QISO MURUGO LEH ) - iftineducation.com
iftineducation.com – Gabar somaliyeed oo xiriir la soo sameysay shabakada caalamiga ah ee iftineducation.com ayaa waxay uga shekeysay dhacdo xanuun badan oo ku dhacaday.
Saciido waa gabar 18 sano jir ah ku dhalatay magalada mogadisho kuna kortay magalada mogadisho. Saciido waxayna wax ku baratay iskuulada magalada mogadisho ilaa herka dugsiga sare ku sooqadatay axmed gureey Ee magalada mogadisho.
Saciido maalin malmaha ka mid ah ayeey waxay soo aday internedka waxayna aad u isticmaali jirtay facebook oo barigaas ad loo gu daad sanaa.
Saciido waxay soo garatay golaha intarneedka lagu kireeyo oo aad markas loo buuxay marqura ayeey tilabsatay saciido waxayna is tagtay mesha lagu jaro karka lacagta ay ku shuban laheed intarneedka si ay u is timacasho. Shirkada qadka kireysa waa webteel oo aad casri u ah markas.
Shirkad ku mid ah oo qadka intarnedka kireyso mogadisho kuma talo waa shirkad qadkeda aad u sareyo , waxayna ay ledahay kaarar lacagtada kushubanayo.
Saciido waxay furatay computerka ayada oo aad u deg degsan ayeey waxayna gashay ciwanka facebookgeeda waxana salaanta ka qaday wiilka dunida ay u jeclan doonto oo noqon dodana ninkeda.
Salaan kadib waa lesbartay waxana lawada socoday muda yar oo gaban saciido waa amin tay Cali yare wuxuuna ushegay in ay tahay qofka dunida uu radinayay in ay tahay saciido. Dumarka waa dacad inta badan balse raggane qaar baa lug ulaban. Saciido maalmo kadib waa la maharsaday hooyadeed iyo abaheed ma oga maxa dhacay talow.
Saciido marka uu maharkii uu dhacay sida hooyaded iyo abahed uga qaranjirtay ayaa warqadeda furiinka ah loo soo dhigay facebook.
Saciido waa qaracan tay dhib iyo rafaad ayey la kulantay maxaysa is tiri hadii aan u shegan laha abaheey iyo hoyadey waxba igama halabi laheen
Saciido labadii walid oo dhashay waxay u tahay gabar, lkn waa garoob oo nin bay facebook ka maharsatay waana lagu furay